မေးခွန်များစွာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ ဘာကြောင့် အောင်လ အနိုင်ရခဲ့သလဲ..? by popolay.com
မေးခွန်များစွာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ ဘာကြောင့် အောင်လ အနိုင်ရခဲ့သလဲ..?
03 Jul 2017 4,443 Views
တစ်လောက အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ မေးခွန်းတွေထွက်လာတာကတော့အောင်လ အနိုင်ယူခဲ့မှုဆိုတာက မေးခွန်းများစွာနဲ့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ ကိစ္စက အတော်လေးဂယက်ထခဲ့ပြီး ဘာကြောင့် အောင်လ အနိုင်ရခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ Han Lin Khitအကောင့်ကနေ အခုလိုပဲသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ မူရင်းစာရေးသူ အာဘော်မပျက်ရလေအောင် တိုက်ရိုက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
" (အောင်လ ဘာကြောင့်နိုင်)
စည်းမျဉ်း - ဒိုင် (3)ဦးရှိ။ Ring area အတွင်း မတူသည့် ထောင့်များမှ စောင့်ကြည့်အမှတ်ပေး။
(ဒီအပိုင်းမှာ ရှင်းပါတယ်။ ဒိုင်တွေ အမှတ်ပေးတဲ့ နေရာကိုပြတယ်)
စည်းမျဉ်း - (၁၀) မှတ် စနစ်ဖြစ်။ (၅)ချီအပြီး နိုင်သည့်သူ (၁၀)မှတ်၊ ရှုံးသည့် သူ (၉)မှတ်။ သရေဟု သတ်မှတ်လျှင် (၁၀-၁၀) မှတ်။
(ဒါကလည်း အမှတ်ကြေညာတဲ့ အချိန်မှာ သုံးတဲ့ overall points ပါ။ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး)
စည်းမျဉ်း - mixed martial arts techinques အစုံအလင် သုံးနိုင်မှု ကို ဦးစားပေးအမှတ်ပေး။ ထိရောက်သည့် ထိုးချက်ကန်ချက်၊ ထိရောက်သည့် ချုပ်ကိုင်မှု၊ ကြိုးဝိုင်းဧရိယာကို လွှမ်းမိုးနိုင်မှု၊ ထိရောက်သည့် တိုက်စစ် သို့ ခံစစ် ပုံစံကို ပြနိုင်မှု။
(ရုရှားက အချုပ်တစ်မျိုးတည်းကို အားပြုကစားသွားတယ်။ ဒါက ဦးစားပေး အမှတ်ကိုမရ။ ထိရောက်သည့် ထိုးချက်ကန်ချက်မရှိလို့ အမှတ်သိပ်မရ။ ထိရောက်သည့် ချုပ်ကိုင်မှု အပိုင်းမှာ အားနည်း။ ထိရောက်သည့် ချုပ်ကွက်ဆိုတာ မလေးမှာ ထိုးတုန်းက ပုံစံ။ ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတိုင်း မကြာခဏ Failed ဖြစ်တာတွေက အောင်လကိုအမှတ်ရစေခဲ့။ ကြိုးဝိုင်းဧရိယာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုမှာ အောင်လ အသာစီးရ။ အောင်လက ထိရောက်သည့် ခံစစ်ပုံစံကို ပြသနိုင်ခြင်းကြောင့် အသာရ)
စည်းမျဉ်း - ထိရောက်သည့် တိုက်စစ်ဆိုသည့် စကားရပ်အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလို။
(မတော်ချီ ဟု ခေါ်သည့် လက်သီး၊ ကန်ချက်တို့မှ သာမန်ကွဲခြင်းပြဲခြင်းသည် အရေးမပါ။ contestant overwhelmingly dominates by striking or grappling ကိုသာ ဆိုလို။ ရုရှား မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့။ အောင်လ အနည်းငယ်ကွဲခဲ့ခြင်းက အရေးမပါ)
စည်းမျဉ်း - ခိုင်မာသည့် ခံစစ်ဆိုသည့် စကားရပ်အတွက် ပြိုင်ဘက်က တိုက်စစ်ဆင်နေသည့် အချိန်၊ ချုပ်ကိုင်မိချိန်တွင် တန်ပြန်တိုက်စစ်ပြန်လည် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (တိုက်စစ်ဆင်သူ၏ အမှတ်ကို တန်ပြန်တိုက်စစ်သမားက ပြန်ရ)
(အောင်လ အဓိက အမှတ်ရစေသည့် အချက်။ ပထမအချီမှာ တိုက်စစ်နဲ့ အမှတ်အပြတ်အသတ် အသာစီးယူပြခဲ့သလို၊ နောက်ပိုင်းအချီတွေမှာ ခံစစ်ပုံစံကိုပြခဲ့။ Avoiding grappling များပြနိုင်၊ တန်ပြန်တိုက်စစ်ပြနိုင်)
စည်းမျဉ်း - ပွဲချီ တစ်ခုအတွင်းမှာ လက်ရည်တူ ၁၀-၁၀၊ လက်ရည်မကွာ ၁၀-၉၊ တိုက်စစ်သို့၊ ချုပ်ကွက်ဖြင့် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း ၁၀-၈၊ အပြန်အသတ်ကွာ ၁၀-၇။ အချီအားလုံးအပြီး အမှတ်များသူက ၁၀-၉ ဖြင့် နိုင်။
(တစ်ချီမှာ သိသိသာသာ အသာရခြင်းက ဥပမာ ၁၀-၇ တစ်ပွဲနိုင်ထားလျှင်၊ ကျန် လေးချီ နှစ်ချီ အမှတ်တူ၊ ကျန် (၂)ချီမှာ မတိမ်းမယိမ်း နိမ့်လျှင်ပင် (၅၈)မှတ်ရ။ ပြိုင်ဘက်မှာ နှစ်ချီသာ၊ နှစ်ချီသရေ၊ တစ်ချီ နိမ့်အနေအထားဖြစ်နေလျှင်ပင် (၅၇)မှတ်သာရ။ နောက်ဆုံး အမှတ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် (၁၀-၉) ဖြင့် ပြန်ပေါင်း ဆုံးဖြတ်)
***ထို့ကြောင့် အောင်လ နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။"
မည်သို့ပင် ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပြောကြပါစေ။အောင်လအနိုင်ယူတဲ့ပွဲက ကမ္ဘာ့အဆင့်ပွဲပါ။အစဉ်အဘာကြီးမားတဲ့ ပွဲတစ်ခုပါ။ပထမ အချီမှာ ကတည်းက မြန်မာ့ စပါးအုံးလို့ နာမည်ကျော်တဲ့ အောင်လ က ချန်ပီယံ ဗစ်ဒစ်ရ်ှကို အသာစီး နဲ့ ထိုးသတ် နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယ အချီ၊ တတိယ အချီ နဲ့ စတုတ္ထ အချီ တွေမှာ တော့ လက်ရည် က သူတင် ကိုယ်တင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငါးချီ ပြည့် ထိုးသတ် ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒိုင်တွေ အားလုံး က အမှတ်ပြည့်ပေးပြီး တညီတညာထဲ အောင်လ ကို အနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။